SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: ရွှေကျောင်းသား၏ နှိုးဆော်စာ
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနိူင်ငံ အသီးသီးတွင် သီးတင်းသုံးလျက်ရှိကျသော ဆရာတော်များအား တပည့်တော်တို့ရိုသေစွာ ဦးတိုက် လျောက်ထားပါသည်။ တပည့်တော်တို့ မွေးဖွားရှင်သန်ခဲ့သော အမိမြန်မာနိူင်ငံ၏ နိူင်ငံရေး အနေအထားသည် ကြီးမားသော အလှည့်အပြောင်းကို ရောက်ရှိနေပါသည်၊ စစ်အစိုးရသည် (2008) ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုပြီး (2010) ၌ ရွေးကောက်ပွဲအသစ် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားပါသည် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်၌ လက်နက်ကိုင် အပစ်ရပ် လူမျိုးစုများ၏ တပ်ကို တပ်မတော်လက်အောက် အတင်းပြောင်းထားရှိရန် ဆွေးနွေးစီစဉ်လျက် ရှိပါသည်။ ဤလုပ်ရပ်သည် အမျိုးသားအခွင့်အရေး ပြဿနာကို ပြီိးပြတ်ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းခင် စပ်ကြား လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့အများစုမှာ လက်သင့်မခံနိုင် ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ဤအစီစဉ်အတိုင်း မဖြစ်မနေ အကောင်အထည် ဖေါ်မည်ဆိုပါက ယနေ့ရရှိထားသော ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးသည် များစွာစိုးရိမ်သောက ရောက်စရာ အနေအထားသို့ ရောက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ခွန်ထွန်းဦးတို့ အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံးကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီး အမျိုးသားပြန်လည်သင့် မြတ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးပြဿနာကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအပစ်ရပ်အဖွဲ့ တွေလဲ လက်နက်ကို လက်နက်နဲ့ တုန့်ပြန်ဖို့ တာစူနေကြပါသည် ဘုရား။ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ရင် ပြည်သူတွေ ပိုဒုက္ခရောက်မှာပါ။ လူမှူဘ၀ ဖူလုံမှုမရှိခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရကာ ၄င်းတို့၏ လုပ်ခလစာများကို ထိုက်သင့်အားလျော်စွာ မရရှိခြင်းကြောင့် အလုပ်သမားများလည်း ဆန္ဒပြလျက်ရှိပါသည်။ အချိန်မနှောင်းခင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိူင်ငံရေးသမားများ လွတ်မြောက်ရန်နှင့် စေ့စပ်ညှိုနှိုင်းရန် ပြည်သူအားလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုဖို့ လိုပါတယ် ဘုရား။ တိုင်းသူပြည်သား(တပ်မတော်သား၊ ကျောင်သား၊ အရပ်သား၊ ဘုရားသားတော်များ၊ မြန်မာနိူင်ငံသား)အားလုံး ပါဝင်လာကြရန်မှာ ၄င်းတို့ အသီးသီး၌ အခြေခံနိူင်ငံရေး အသိအမြင်များ ရှိကြရန်၊ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များ၏ လက်တစ်လုံးခြား လိမ်ညာခဲ့မှုများကို ဆက်စပ်စဉ်းစား နားလည် သဘောပေါက်ကြရန် လိုပါတယ် ဘုရား။ သို့မှသာ တပည့်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားသော လွပ်လပ်ငြီမ်းချမ်းပြီး တရားမျှတသည့် ဒီမိုကရေစီနိူင်ငံ ပေါ်ပေါက်လာမှာ ဖြစ်ပါသည်။ တပည့်တော်တို့ အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ နိူင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ မျိုးချစ်နိူင်ငံရေး သမားများအနေဖြင့် လည်းကောင်း နိူင်ငံရေး အသိပညာပေး ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲများကို အရှိန်အဟုန်မြင့် ပြုလုပ်ကြဖို့ လိုပါတယ်ဘုရား။
တပည့်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက အချုပ်ခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲ၊ တိုင်းရင်သား စည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲ၊ တိုင်းပြည် အေးချမ်းသာယာမှာလို့ ထင်ခဲ့ကြတယ် ဘုရား တစ်မျိုးသားလုံး၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် အကျင့်စာရိတ္တ မြင့်မားမှ ဒီမိုကရေစီ ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြတယ် ဘုရား။ တစ်မျိုးသားလုံး၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် အကျင့်စာရိတ္တမြင့်မားရန်မှာ တိုင်းသူပြည်သားများ၏ လူမှူဘ၀ဖူလုံရန်နှင့် အခြေခံ နိုင်ငံရေး အသိအမြင်များ ရှိကြရန် လိုပါတယ် ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ မှာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ၊ ပညာရေး(ကျောင်းသွားလာရေး ခက်ခဲမှု)အတွက် လုံးပန်းရင်း နိုင်ငံရေး အသိအမြင်ရှိဖို့ ဝေးစွ အခြား ဗဟုသုတများ လေ့လာလိုက်စားရန်ပင် အချိန်မရခဲ့ကြပါ ဘုရား။
တပည့်တော်တို့ တိုင်းရင်သား လူမျိုးအချင်းချင်းမှာ သင့်မြတ်ပြီးသားပါ ဘုရား။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုလားမ၀င်ရ၊ ခရစ်ယာန်မ၀င်ရ၊ တိုင်းရင်သားလူမျိုးစုများ ၀င်ထွက်ခွင့်မရှိသော ကန့်သတ် တားမြစ်ထားသည့် နေရာမရှိပါ။ သို့သော်လည်း နယ်စပ်ဒေသများတွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ အပေါ်၌ အတင်းအဓမ္မ ချွေးတပ်ဆွဲ၊ ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခိုင်းခြင်းများ၊ စစ်တပ်ကို ဆန့်ကျင်သည့် သူပုန်ရွာများအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ တပ်မတော်သား အများစုမှာ ဗမာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါသည်။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပြိုကွဲအောင် ဘယ်သူလုပ်တာလဲ ဘုရား။ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားရသော မိသားစုတွေ၊ မိဘမဲ့ကလေးတွေ၊ မုဆိုးမတွေ ဟိုဖက်ဒီဖက်မှာ အများကြီးပါဘုရား။
လူမှုဘ၀မဖူလုံလို့၊ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းလို့ ဆွမ်းခံကြွကိုယ်တော်တွေကို ဆွမ်းနပ်မှန်အောင် မလှူနိူင်ကြတော့ဘူး ဘုရား။ ရာသက်ပန် သာသနာ့ဘောင် ၀င်မည့်သူတွေ မဆိုထားနှင့် တပတ်၊(၁၀)ရက် ကိုရင်ဝတ်၊ ပဇင်းတက်မည့် သူတွေတောင် စစ်အစိုးရနှိပ်ကွပ်မှုကြောင့် စဉ်းစားနေရပါပြီ ဘုရား။သာသနာ အဒွန့်ရှည် ပြန့်ပွားရေးအတွက် တပည့်တော်တို့ မည်သို့ဆက်လက် စဉ်းစား ဆောင်ရွက်နိူင်ပါမည်လဲ ဘုရား။
တပည့်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်၊ အခွန်တွေ ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ တပည့်တော်တို့အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်လာခဲ့ကြရင်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသက်၊ ခြေလက်အင်္ဂါ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင် ထိုက်သင့်မျှတတဲ့ လျှော် ကြေးတွေ၊ ကူညီထောက်ပံ့မှူတွေ ဘာလို့ မရခဲ့ကြတာလဲ ဘုရား။ဆေးဝါးကုသဖို့ လုံလောက်တဲ့ငွေကြေး မတတ်နိူင်သူတွေ သက်တမ်းမစေ့ဘဲ ကြွေလွင့်သွားခဲ့ရသူတွေ မရေတွက်နိူင်တော့ပါဘူး ဘုရား။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူတွေ အိုးပိုင်အိုင်ပိုင်နှင့် နေနိူင်ဖို့ မဆိုထားနှင့် ဆန်ကောင်းကောင်းနှင့် ဟင်းကောင်းနပ်မှန်ဖို့၊ သူသူကိုယ်ကိုယ် တန်းတူဝတ်နိူင်စားနိုင်ဖို့ဆိုတာ သူတို့အတွက် အိပ်မက်တွေ ဖြစ်နေကြပြီ ဘုရား။ ၄င်းတို့၏ လုပ်အားကို ထိုက်တန်သည် မထိုက်တန်သည် စဉ်းစား မနေနိူင်ဘဲ ရရာဈေးဖြင့် ရောင်းနေရပါတယ် ဘုရား။ မြန်မာနိုင်ငံ သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတာ ၊တောင်သူလယ်သမား တွေ စပါးစိုက်တာ တိုင်းသူပြည်သားတွေ အတွက် မဟုတ်ဘူးလား ဘုရား။
တပ်မတော်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ စတင်ဖွဲ့စည်း ကတည်းက ဗမာ့တပ်မတော်၊ ပြည်သူ့တပ်မတော်၊ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆိုပြီး ဖွဲ့ စည်းခဲ့ကြတယ်။ တပ်မတော်ဟာ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ပြည်သူတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ မဟုတ်ဘူးလား ဘုရား။ ယခုအခါ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များ၏ ပရိယာယ်နဲ့ စည်းလုံးသိမ်းသွင်းမှုကြောင့် ယခုအခါ တပ်မတော်သားများနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာ ရပိုင်ခွင့်နဲ့ အာဏာကိုသာ မက်မောနေကြပြီး ပြည်သူတွေကို ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီး ဒုက္ခပေးနေကြတယ် ဘုရား။ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကလဲ ပြည်သူ့ဘဏ္ဏာတွေကို အလွဲသုံးစား လုပ်နေကြပါတယ် ဘုရား။
ပြည်ပမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိူင်ငံသား အများစုဟာလည်း ကိုယ့်အရိုး ကိုယ်မသယ်နိုင်တဲ့ အချိန်အထိပြည်ပမှာ အခြေချနေထိုင်ဖို့ စဉ်းစားပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ် မေ့နေကြပါပြီ ဘုရား။ ဗုဓ္ဒဘာသာဝင် တိုင်းဟာ ကံ၏ အကျိုးဆက်နဲ့ ငါးပါးသီလကို နားလည်ကြသလို နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ မိမိနိူင်ငံ၏ အခြေအနေနှင့် နိုင်ငံရေးကို အခြေခံအားဖြင့် နားလည်လက်ခံ ပါဝင်ကြဖို့ လိုပါတယ် ဘုရား။
ပထမအဆင့် အနေနဲ့ လာမယ့် မတ်လ၂၇ရက်နေ့ တော်လှန်ရေးနေ့မှာ ပြည်ပမှာ ရောက်နေသော ကျောင်းသားများ၊ အလုပ်သမားများနှင့် နိုင်ငံသားခံ မြန်မာလူမျိုးများအားလုံး တစ်ခဲနက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရန် အတွက် ရည်ရွယ်ထားရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးလဲ ပါဝင်ဆန္ဒပြကြဖို့နှိုးဆော် အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
တပည့်တော်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့် လုပ်ရပ်များအား နိုင်ငံအတွက် အသက်ပေးသွားကြသော အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများနှင့် တကွ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ ရဲဘော်ရဲဘက်များအားလုံး တမလွန်မှ ကျေနပ် နှစ်သိမ့်နိုင်ကြပါစေ၊ ရည်ရွယ်ချက် အရေးတော်ပုံအောင်မြင်သည် အထိဝန်းရံ စောင့်ရှောက်နိူင်ကြ စေသောဝ်……….
မြန်မာနိူင်ငံသားများဟာ ဘောလုံးပွဲမှာ မြန်မာရှုံးရင် ပျော်နေတဲ့လူမရှိ။ ရင်ထဲမှာ ကျိတ်ငိုနေကြတဲ့ လူတွေကြီးပါဘဲ။ မြန်မာအစားအစာဟာ ငါတို့အစားအစာ၊ မြန်မာပွဲဟာ ငါတို့ပွဲ ဆိုပြီးခံယူကြသလို မြန်မာအရေးဟာ ငါတို့အရေးလို့ မြန်မာနိုင်ငံ နိူင်ငံသားအားလုံး ခံယူကြဖို့ လိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာမွေး၊ မြန်မာစာစားခဲ့ ၊ မြန်မာရေသောက်ခဲ့ကြတဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ် ပြန်ကြည့်ပေးကြပါဗျာ။
ငါတို့ ရှာနေတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ၊ ငါတို့ရင်းနှီး ပေးဆပ်ခဲ့မှုတွေက ငါတို့ရဲ့မျိုးဆက် တဆက်လောက် ကိုဘဲ ကောင်းစားစေနိုင်တယ် ဆိုတာ ငါတို့တွေအားလုံး သိကြဖို့ လိုပါတယ်။ ငါတို့ ဘ၀တွေရဲ့ သက်တမ်း သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကို ရင်းနှီးပေးဆပ်ပြီး ရလာတဲ့ ပညာ၊ ငွေကြေးတွေနဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်များ အလိုရှိသလောက် ထုတ်ဝေထားတဲ့ တန်ကြေးမဲ့ ငွေစက္ကူတွေ လဲလှယ်ရယူဖို့ ဖြစ်နေပြီ။ အာမခံချက်မရှိတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေရဲ့ ကြားမှာ နစ်မြုပ်ပြီးရင်း နစ်မြုပ်နေကြပြီ ငါတို့ရဲ့ငွေစက္ကူတွေ တရားမ၀င် ကြေညာသိမ်းဆည်း ခံခဲ့ရတယ်။ ငါတို့ အမေတွေ လက်ထက်က ပြည့်သူ့ဆိုင်မှာ ဆန်ကွဲတွေ ဝေသေးတယ်။ အခုကျတော့ ပြည်ပကထောက်ပံ့တာတောင် ဒုက္ခသည်တွေ လက်ထဲက ပြန်ယူနေကြပြီ။ ဖုန်းဈေး၊ ကားဈေးတွေ မတန်တဆ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ငါတို့တွေ ၀ယ်ခဲ့ကြတယ်။ တေဇက ကဒ်ဖုန်းတွေ ထုတ်တယ်။ ဦးပိုင်က ကားတွေသွင်းတယ်။ မတည်ငြိမ်တဲ့ စီးပွားရေး လှည့်ကွက်ကြားမှာ ငါတို့တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာ အများကြီးဘဲ။ ဘာတတ်နိူင်လဲ။
လူငယ်တွေ ဘွဲ့ရကြတယ်။ ဘွဲ့ရဖို့ငါတို့သက်တမ်း သုံးပုံတစ်ပုံလောက် ပေးဆပ်ခဲ့တယ်။ ထိုက်သင့်တဲ့ လစာအကျိုးအမြတ်တွေ ငါတို့ ရကြရဲ့ လား ? ပိုက်ဆံရှိရင် နိူင်ငံခြားသွားပြီး ကျောင်းတက်မယ်……မရှိရင်တော့ နိုင်ငံခြားသွား ကျွန်ခံရပြီပေါ့။ လူငယ်တွေ …. ဘောစိသမီးကို ယူမှ၊ နိူင်ငံခြားသွားမှ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် ဘ၀အာမခံချက် ရမှာလား ?
မိန်းကလေးတွေကော….စပွန်ဆာရှာဖို့ ကြီးဘဲ စဉ်းစားနေကြပြီ။ စားဝတ်နေရေးကြောင့် ဘ၀ပျက်နေကြရတဲ့ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေ ဘယ်လောက်တောင် များနေကြပြီလဲ? သူ့အိုးသူ့ဆန် တန်ရုံထက်တောင် ကျော်နေကြပြီ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရယူပေးခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးက ငါတို့ တကယ်ခံစား နေကြရလား ? နိူင်ငံရေး အကြောင်း လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနိူင်ခွင်၊့ လေ့လာပိုင်ခွင့်ရှိလား ? ငါတို့ရဲ့ လူနေမှု အဆင့်အတန်းတွေ၊ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အကျင့်စာရိတ္တတွေ မြင့်မားခဲ့ကြလား ? မြင့်မားဖို့အတွက် စဉ်းစားဖို့ အချိန်နဲ့ လူမှူဘ၀တွေ ဖူလုံခဲ့ကြရဲ့လား။ စားဝတ်နေရေး အတွက်ဘဲ လုံးပန်းနေရတာ မဟုတ်လား ? တိုင်းပြည် သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတာ၊ တောင်သူလယ်သမားတွေ စပါးစိုက်ကြတာ၊ ငါတို့ နိုင်ငံရဲ့ စက်ရုံတွေက ကုန်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်ကြတာ ငါတို့ အကျိုးမခံစားရ ဘူးလား ?
ဦးပဉ္ဖင်းတွေကော ကောင်းမွန်စွာ တရားအားထုတ်နိူင်ကြလား ? လမ်းမှာ ဆွမ်းခံကြွလာရင် တချို့တွေက ဘယ်လိုမြင်နေကြပြီလဲ။ ကျောင်းသားတွေ ပညာရေးကိုကော တကယ်လိုက်စားနေကြလား ? အင်္ဂလိပ် လက်ထက်က ဆယ်တန်းအောင်ရင် ဘီအေတန်းဖြေပြီး မြို့ပိုင်၊ နယ်ပိုင်လုပ်လို့ ရသေးတယ်။ အခုဆယ်တန်းအောင်တဲ့ လူငယ်တွေ DSA သွားတဲ့ လူငယ်တွေ အခွင့်အရေးနှင့် အာဏာ စစ်ခေါင်းဆောင်တချို့ရဲ့ လှည့်ကွက်ကြားမှာ ဘုန်းကြီးနဲ့ ပြည်သူတွေကို သတ်နေကြပြီ။ ဗိုလ်မှူးကို အဘ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကို အဖေခေါ် မင်းတို့ ဇနီးမယားတွေကော အဆင့်ဆင့် ဒူးတုပ်နေကြရတယ် မဟုတ်လား ? ဘ၀တက်လမ်းအတွက် လူငယ်တွေ အကုန်လုံး စစ်ထဲဝင်ကြဖို့လား၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူတွေ အတွက်၊ နိုင်ငံတော် အတွက် မြန်မာနိူင်ငံသားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့၊ ခံယူချက်တွေ မမှားကြဖို့ ပြင်ဆင်ကြဖို့လိုပါတယ်။
စီးပွားရေးသမားတွေ…..မိတ်ဆွေတို့ ရှာနေတဲ့ ငွေးကြေးနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှူတွေက စစ်ခေါင်းဆောင်များရဲ့စီးပွားရေး လှည့်ကွက်အောက်မှာ အာမခံချက်မရှိဘူးနော်။ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ရှာဖွေဝယ်ယူခဲ့ရတဲ့ ငွေကြေးမျှတရဲ့လား။ ၀ါဇီက ထုတ်ချင်တိုင်း ထုတ်လိုက်တဲ့ ဖောင်းပွနေတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက် အသဲအမဲ လိုက်ရှာနေကြတယ် မဟုတ်လား။
ပြည်သူ့ ၀န်ထမ်းတွေကော နိုင်ငံတော်က ပေးတဲ့လစာနဲ့ လောက်ငှကြရဲ့လား ? လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကင်းချင်ပေမယ့် လုပ်နေကြရတယ်၊ များများစားရမဲ့ နေရာကို ရောက်ရဖို့ဘဲ ကြိုးစားနေရတယ် မဟုတ်လား?
ငါတို့တွေ အားလုံး အခြေခံ နိုင်ငံရေး အသိအမြင်ရှိဖို့ လွတ်လပ်စွာ လေ့လာပြောဆိုနိူင်ဖို့ မှန်ကန်တဲ့ တွေးခေါ်မှုနဲ့ တိကျတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချဖို့လိုပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကို လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်များဟာ ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ အာဏာ၊ ရပိုင်ခွင့်၊ တည်မြဲရေးကို ရှေးရှုနေကြတာ ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်ပြီး လစ်လျူရှူပြီး မနေသင့်တော့ပါဘူး။ မိမိလူမျိုး၊ နိုင်ငံ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ယဉ်ကျေးမှု၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင၊် သယံဇာတတို့ကို ကိုယ့်ဘာသာ မထိန်းသိမ်းလျင် ဘယ်သူ ထိန်းသိမ်းမှာလဲ? လူ့ အခွင့်အရေးဟာ လူသားတွေ အားလုံးနဲ့ ပတ်သတ်သက်ဆိုင် နားလည်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် မသမာသူ ဝိသမ လောဘ စီးပွားရေးသမားများနှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်များကို ဖယ်ရှားပြီး လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ပေါ်ပေါက်လာရန် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါသည်။
ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ လာမယ့်မတ်လ၂၇ရက်နေ့ တော်လှန်ရေးနေ့မှာ ပြည်ပမှာ ရောက်နေသော ကျောင်းသားများ၊ အလုပ်သမားများနှင့် နိုင်ငံသားခံ မြန်မာလူမျိုးများအားလုံး တစ်ခဲနက် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုရန် အတွက် ရည်ရွယ်ထားရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးလဲ ပါဝင်ဆန္ဒပြကျဖို့ နှိုးဆော်အသိပေး အကြောင်းကြား အပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့် လုပ်ရပ်များအား နိုင်ငံတွက် အသက်ပေးသွားကြသော အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ တကွ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ ရဲဘော်ရဲဘက်များအားလုံး တမလွန်မှ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်နိုင်ကြပါစေ၊ ရည်ရွယ်ချက် အရေးတော်ပုံအောင်မြင်သည် အထိဝန်းရံ စောင့်ရှောက်နိူင်ကြစေသောဝ်……….
Posted by saffrontoward at 8:39 PM